Dowladda Kenya oo beenisey in ciidankeedu kufsi kageysteen gobolka W.Bari. – Radio Daljir
Agoosto 2, 2016 10:52 g 0
Mandheera, Aug 03 2016–Xukuumadda dalka Kenya iyo ciidanka difaaca dalkaasi ee KDF ayaa siwada jir ah u beeniyey warar soo baxayey maalmihii ugu dambeeyey oo sheegayey in ciidamada dalkaasi ay falal isugu jira dhac iyo kufsi ka geysteen gobolka Waqooyi Bari ee dalkasi.
War ay soo saareen saraakiisha ciidanka ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay ku beeniyeen in ciidankoodu ay falal anshax xumo ah ka geysteen gobolka waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya, sida ay hadalka u dhigeen.
“Arimahan ciidanka Kenya lagu soo eedeeyay waa waxba kama jiraan ciidanka Kenya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxa ay ujoogaan in ay ka hortagaan weerarada Dagaalyahanada Shabaab mararka qaar ay ka geystaan dalka Kenya” Ayuu yiri sarkaal u hadlay dowladda Kenya.
Shacabka kunool Tuulada Sheekh Barrow ee Deegaanka Lafey ayaa dhowaan waxa ay sheegeen in goobahooda ganacsiga boobeen ciiddankii Kenya ee loo xil saaray in ay ka hortagaan weerarkii ay Shabaab Jimcihii hore ku qaadeen Deegaanka Lafey.